प्रशंसापत्र दर्द - मन जीवित - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
२ बर्षको लागि म अटेरर्ड भएको छु र मेरो पारिवारिक जीवन र मेरो कामको माध्यमबाट लडेको छु। दुर्भाग्यवस, १ बर्षको लागि मलाई लामो समयदेखि पीडाको अवस्था रहेको छ र धेरै पीडा संकटहरू पनि छन्। मैले एक परिचित मार्फत डेभिड आनन्दको बारेमा पत्ता लगाए। म अब2दिन को लागी प्रयोग गरीरहेको छु र नया व्यक्तिको जस्तै महसुस गर्छु। निरन्तर तनाव समाप्त भएको छ। सबै कुरा स्पष्ट छ। मसँग अब "डिस्टर्बिंग" भावनाहरू छैन र म फेरि उच्च स्तरमा ध्यान दिन सक्षम छु र बढी सन्तुलित छु। विकासकर्ताहरुलाई एक शानदार धन्यवाद।
Cynthia Kerson बाट प्रशंसापत्र
मैले लगभग एक महिना अघि कन्धको शल्यक्रिया गरेको थिए र मेरो कागजात र पीटीले दुखाइ र गति बढाउनका लागि मादक पदार्थ सेवन गरिरहनु भनेर आग्रह गरेको छ। तिनीहरू भयrible्कर छन् (ड्रगहरू - कागजातहरू होइन)। ती मतली र टाउको दुखाइ को कारण। र फिर्ता यातना गरिएको छ। तथापि, ओएसिस CES मलाई शान्त पार्छ र पीडा कम हुन्छ। मैले थाटा र अल्फा सत्र गरिरहेको छु र पहिले र पछिको फरक उल्लेखनीय छ। कुनै मतली छैन। कुनै टाउको दुखाई म दिनमा दुई min 45 मिनेट सत्र गरिरहेको छु। मेरो पीटी गति सुधारको दायराबाट प्रभावित छ मैले कुनै पनि औषधी नलिईकन। डेभलाई धन्यवाद र मन जिउँदो!
म इमान्दार भई मेरो डेभिड बिना बाँच्न सक्दिन प्रसन्नता प्रो। यसको CES एक्लो समारोहले अमेरिकी मोडेलको गुणस्तरलाई पार गर्छ! तर यति धेरैको साथ एक उपकरण छ! यो सीईएस र अडियो र दृश्य प्रविष्टि को एक उत्तम फ्यूजन। म यो उपकरण अरूसँग साझेदारी गर्न सक्षम छु। मेरो श्रीमान् वायुसेनाको २ 23 बर्षे अनुभवी हुनुहुन्छ र युद्धबाट घर फर्केका वेटरनहरूसँग काम गर्छन्। यो यति धेरै मूल्यवान हुन्छ PTSD vets को लागी पीडा र उदासी कम गर्न मद्दत पुर्‍याउन र तिनीहरूको मानसिक ध्यान फिर्ता लिन। यसले मलाई डिप्रेसन र फाइब्रोमाइल्जिया दर्दको साथ साथै मेरो लागि पनि मद्दत गर्‍यो एडीएचडी। धन्यबाद, मैले यो आश्चर्यजनक कम्पनीको बारेमा थाहा पाइन!
"म एक धेरै नै खुसी नयाँ प्रयोगकर्ता हुँ डेभिड प्रसन्न प्रो। मैले +०+ बर्षको लागि AVE र ध्वनी आधारित टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको छु - मैले Monroe Institute Hemi-Sync क्यासेटहरू tes० को दशकमा प्रयोग गरें। तपाईंको टेक्नोलोजी मैले प्रयोग गरेको सब भन्दा राम्रो हो। म यसलाई आराम गर्न, ध्यान गर्न, वा ऊर्जा दिन प्रयोग गरिरहेको छु; एक टाउको दुखाइ राहत वा रचनात्मकता प्रेरित; को डेभिड प्रसन्न प्रो काम सजीलो र निर्बाध रूपमा गर्दछ। अब यो मेशिन प्रयोग गर्न को लागी एक झगडा भयो। मेरी छोरीले आफ्नो पीरियडहरू सजिलो पार्नको लागि र 82२-वर्षीय बुवाले यसलाई दुखाइ कम गर्नका लागि प्रयोग गर्दै यस औजार हाम्रो घर वरपरको लोकप्रिय चीज हो! ”
एलेन एसबाट प्रशंसापत्र
"मेरो श्रीमान् अस्पतालको हेरचाहमा हुनुहुन्छ - डरलाग्दो रातहरू - उत्तेजित - निन्द्रा छैन। सामान्य उत्तर मोर्फिन दिने हो तर हामीले डेभिड प्रयोग गर्‍यौं।
पूर्ण रूपमा रातको अनुभव परिवर्तन गरियो। अब ऊ सहज छ। कुनै थप टिभीहरू छैनन्। सुन्दर सुस्त। मैले जानकारी Hospice मानिसहरूलाई दिए।
ठीक छ, डेभ सीभर। म तपाईको काम र तपाईहरु सबैलाई धेरै नै हार्दिक सम्मान गर्दछु जसले यस उपचार उपकरणको निर्माण गर्न काम गरेका छन। "
सर्जेन्ट गुडचल्डबाट प्रशंसापत्र
अगस्ट 6, 2014
“शनिबार दिउँसो एक स्ल्याकलाइनमा खेल्दा मलाई एक इंटरेयोकेन्टरिक फ्र्याक्चर भयो। उनीहरूले मलाई दुखाइ औषधोपचार दिउँसो4बजे एक्स-रे तालिकामा एक्स-रेको श्रृ transfer्खलाग्दो स्थानान्तरण गरे। त्यस बिन्दु देखि आज सम्म र मैले सबै दु: ख सब-डेल्टा AVE र CES को साथ व्यवस्थापन गरेको छु। मैले आइतवार बिहानसम्म शल्यक्रिया गरेन त्यसैले यो एक धेरै कष्टदायी रात हुनुपर्दछ। कुनै मजाक छैन, यस प्रविधि मोर्फिन भन्दा राम्रो छ। केवल सीईएस एक्लै मलाई १ 15 - २० भित्र सुत्नको लागि पर्याप्त थियो र म १. - - २ घण्टा सुत्नको लागि उठ्नेछु र दोहोर्याउँथें। आइतवार दिउँसो म मेरो वाकरसँगै हलवेमा र्याप गर्दै थिए भने मलाई दुखाइ चाहिएको हो कि भनेर नर्सहरूले मलाई सोध्न छोडिदिए। ”
मिशेल बी बाट प्रशंसापत्र
"द ओएसिस प्रो मेरो दुखाई नियन्त्रण तालिकामा ठूलो थप गरिएको छ, यस्तो लाग्छ कि मैले विगतमा प्रयोग गरेको TENS उपकरणहरू भन्दा गहिरो पीडा अझ गहिराइमा पुगेको हुँ। म यसको सिफारिस गर्न हिचकिचाउँदिन। "
द्विध्रुवीय उदासीनता र दुखाइमा मद्दत पाउन मैले डा। Saunders सँग भेट लिएँ। मैले १ 15 बर्ष भन्दा बढी संघर्ष गर्नु परेको छ र राहत खोज्न सबै प्रयास गरेको छु। टीडीसीएस र सीईएसको साथ डा। Saunders बाट मद्दत प्राप्त गरेको केही महिना भित्र, मेरो अवस्था पूर्ण छुट छ। मैले मेरो जीवन फिर्ता पाए! म बढी आभारी हुन सक्दैन! म प्रयोग गर्न सक्षम हुन विश्वास गर्दछु tDCS र स्वास्थ्यको लागि CES मेरो आफ्नै सहयोगको लागि धन्यवाद। म स्वतन्त्र, बलियो र सशक्त भएको अनुभव गर्दछु। ”
मार्क कोहार्चिक, पीएचडी, LPC बाट प्रशंसापत्र
फन्ड डु लाक, विस्कॉन्सिन, संयुक्त राज्य अमेरिका
डिसेम्बर 1, 2011
"निम्नलिखित डेभिडसँग मेरो अनुभवको बारे हो (पहिलो २००२ मा खरिद गरियो र अझै प्रयोगमा) डेभिड प्रसन्न प्रो नयाँ खरिद गरियो, र बीचमा केहि डेभिड PAL s 36s। मलाई बायोफिडब्याकमा मेरो अनुभव बताउँदै सुरूवात गर्नुहोस् १ in s० को मध्यतिर मांसपेशिको तनावको लागि EMG प्रयोग गरेर। मैले ईईजीको बारेमा सिकें र प्रशिक्षणको माध्यमबाट गएँ र वर्षौंपछि, प्रमाणित हुने पहिलो समूहमध्ये एक थियो। मैले धेरै समस्याहरूको लागि बायोफिडब्याकमा ठूलो फाइदा देखें। मैले यसको प्रयोग चिन्ता, उदासीनता, एडीडी, र प्राय जसो सामान्य गुनासोहरू चिकित्सकहरूलाई प्रस्तुत गर्न उपचार गर्न। अधिकांश बिरामीहरूको लागि उपचार राम्रो भयो। यद्यपि यस उपचारको साथ मेरो सबैभन्दा ठूलो उजूरी बिरामीलाई केही फाइदा लिनको लागि लाग्ने समयको लम्बाइ हो।
त्यसोभए, भाग्यको स्ट्रोकले, अर्को क्लिनीसियनले मलाई AVE को बारेमा बताउँदै थियो र डेभिड प्याराडाइज एक्सएल थियो। उसले यसमा विशेषज्ञता ल्यायो एडीएचडी र मलाई परिवर्तन गर्ने बारेमा उनले मलाई बताउँथे उनी आफ्ना युवा बिरामीहरूमा AVE का साथ। मैले यो "नयाँ ग्याजेट" कोसिस गरें र सोचें कि यसले कुनै पनि चीजको लागि धेरै रकम हुनेछ। खैर, म मेरो जीवनको आश्चर्यको लागि थिए। मैले केहि चीजहरू महसुस गरें जुन मलाई हप्ताहरू वा लामो समय लागी बायोफिडब्याक प्रयोग गरेर, डेभिडको साथ द्रुत रूपमा समाधान भयो। म काटिएको थियो र मेरो एकाई थियो।
मैले २००२ मा DAVID AVE उपकरणहरू प्रयोग गर्न सुरु गरें, र साथै EEG बायोफिडब्याकको साथ जारी राखें। मेरो अभ्यासमा मैले AVE भएकाहरूको लागि धेरै चाँडो प्रतिक्रिया समय याद गरें। बिरामीहरूले यसलाई अन्य उपचारहरू भन्दा बढी रमाईलो गरेको देखिन्थ्यो, र यो प्रयोगकर्ता मैत्री थियो। मैले त्यस्तो नाटकीय सफलता दर देखेको थिएँ कि मैले बिस्तारै EEG को प्रयोग घटायो र AVE को साथ पूर्णरूपमा गएँ। मैले बिरामीहरूमा विशेष सुधारहरू भेटे जुन विशेष गरी लामो पीडाको लागि हो। मलाई यस्तो देखिन्थ्यो कि म सामान्यतया एउटा AVE सत्रमा बिरामी अनुभव लिन सक्ने कुराको बारेमा बायोफिडब्याकको बारेमा तीन हप्ता वा बढी प्रशिक्षण लिने थियो। तर मैले एउटा कुरा बिल्कुल स्पष्ट गर्नु पर्छ। म कुनै पनि हिसाबले बायोफिडब्याक राख्दै छु। म केवल DAVID AVE इकाइहरूको साथ मेरो अनुभवमा टिप्पणी गर्दै छु।
पछिल्ला सात बर्षको लागि, म विशेष रूपमा AVE प्रयोग गर्दैछु। म अस्पतालमा कार्यरत छु र दुखाई प्रबन्ध टोलीको हिस्सा हुँ। मैले फेला पारे कि, धेरै जसो केसहरूमा, सब-डेल्टा .5-1 फ्रिक्वेन्सीको प्रयोगले प्रायः बिरामीहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो पीडा प्रदान गर्दछ। मैले तनाव टाउको दुखाइ, माइग्रेन, फाइब्रोमाइल्जिया, पीटीएसडी, पक्षाघात भएका बिरामी बिरामी (र वास्तवमै प्रभावित ठाउँहरूमा केही महसुस गर्न सफल भएको थियो) र अन्य मनोवैज्ञानिक र शारीरिक समस्याहरूको उपचारको लागि मैले AVE प्रयोग गरेको छु। मलाई लाग्छ कि AVE को लागी अन्तहीन उपचार विचारहरु हुन सक्छ।
कारण मैले शीर्षकको कारण, "म विश्वास गर्दिन!" बिरामीले मलाई बताएको औसत टिप्पणीको कारण हो, सर्वप्रथम जब म AVE के हो भनेर वर्णन गर्दछु र यसले कसरी काम गर्दछ, र त्यसपछि, पहिलो सत्र पछि जब उनीहरूले पीडा कम गर्ने वा आराम गर्ने अवस्था महसुस गर्छन्। मैले यो पनि याद गरें, र सेचन अघि र पनी रक्तचाप रिडि, गर्दै छु। मैले लगातार blood 85% बिरामीहरूमा रक्तचापमा कमी आएको देखेको छु। केहि बिरामीहरूले अविश्वसनीय फाइदा लिएको छ, यति पर्याप्त छ कि उनीहरू आफ्नो औषधीहरू कम गर्न वा रोक्नको लागि सक्षम थिए चाहे यो उच्च रक्तचाप वा पीडाको लागि हो।
डेभिड AVE उत्पादनहरू असाधारण रूपमा विश्वसनीय साबित भएका छन् र, यदि मैले कहिल्यै समस्या अनुभव गरेको छु भने, मैले एक फोन कल गरें, डेभसँग कुराकानी गरे, वा कुनै मैत्री कर्मचारीलाई, र समस्या समाधान भयो। म यस उपचारको सफलतामा आफ्नो आश्चर्य र अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न सक्दिन र त्यस्तो उपकरणको उत्पादनको लागि कृतज्ञ छु जुन त्यस्तो उच्च गुणवत्ताको छ।
डेभ, म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु र मेरा बिरामीहरूलाई पनि धन्यवाद। "
माइकल ल्यान्डग्राफबाट प्रशंसापत्र
सम्पादक, एभीएस जर्नल, ग्रेनाडा हिल्स, क्यालिफोर्निया संयुक्त राज्य
डिसेम्बर 3, 2010
“गत महिना म बाहिरी रोगीहरूको मेडिकल प्रक्रिया गरें जुन एकदमै नराम्रो लाग्यो। त्यसो भए दुई हप्ता पछि मैले एउटा मासुको मांसपेशी तानें र मेरो देब्रे खुट्टामा केही स्नायु लिफ्ट गर्दा एउटा स्नायु पिन्च गरे। दुबै अनुभवहरू कष्टकर थिए, पूर्ण रूपमा उत्तेजित पार्ने कुराको उल्लेख नगरी!
मैले मेरो नकारात्मक भावनाहरू र ती दर्दनाक संवेदनाहरूलाई हटाउन मद्दत गर्न तपाईंको डिलिट प्रोमा सात सत्रहरू प्रयोग गर्‍यो। तपाईंको प्रणालीले मेरो अपेक्षाहरू पार गर्‍यो। यो पहिलो पटक हो कि मैले अत्यधिक असुविधा महसुस गर्ने समस्याको समाधान गर्न AVE उपकरणको साथ दुखाइ औषधी बढाउनु आवश्यक पर्दैन।
२ 25 बर्ष भन्दा बढी उमेरका लागि प्रकाश र ध्वनी उपकरण प्रयोग गरेर, डेलिटेट प्रो पहिलो प्रणाली हो जसले मलाई पीडा सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान गर्न सिफारिस गरेको पीडा औषधिहरूको आवश्यकता बिना नै मद्दत पुर्‍यायो।
तपाईंले डिलिटा प्रोको लागि सिर्जना गर्नु भएको सत्रहरू म पूरै प्रभावित छु र पीडाबाट राहत चाहिने मेरा ग्राहकहरूलाई यस प्रणालीको सिफारिश गर्दा म १००% विश्वस्त छु। ”
डेव नदीहरु बाट प्रशंसापत्र
न्यूकासल, एनएसडब्ल्यू, अष्ट्रेलिया
अप्रिल 11, 2008
“मैले भर्खरै एक DAVID खरीद गर्‍यो। मेरी आमाले यति धेरै माया गर्नुहुन्छ कि म यसमा आफ्ना हातहरू लिन सक्दिन। उनको ल्युपस र दीर्घ पीडा छ। डेभिडसँग, उनको दिन र रात नाटकीय रूपमा सुधार भएको छ। उनका गालाहरू गुलाबी छन् र उनी यति आराम पाएको देखिन्छ (दुर्लभ दृश्य)। त्यसैले म उनलाई एक डेभिड अर्डर गर्दैछु, ताकि म मेरो फिर्ता पाउन सक्दछु। ”
नीना हर्नीबाट प्रशंसापत्र
फेयरबैंक्स, अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका
नोभेम्बर 10, 2005
“म एक 49-बर्षे महिला हुँ जसलाई एक स्वचालित प्रतिरक्षा रोगले धेरै असक्षम पारिरहेको छ। साढे दुई वर्षदेखि डाक्टरहरूले रोग वा पीडा नियन्त्रण गर्न असमर्थ छन्। त्यहाँ एक देखि तीन महिनाको अवधिहरू छन् जुन म पूर्ण ओछ्यानमा परेको छु। यो म र मेरो परिवार मा एक डरलाग्दो तनाव पैदा गर्दछ।
मेरो थेरापिष्टले मलाई सोधे कि यदि म उनको डेभिडलाई कोशिस गर्न चाहन्छु कि यसले तनाव, निद्रा, बढ्दो उर्जा, र दुखाइ नियन्त्रण लाई कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ कि भनेर। मैले हो भनें- तर मँ धेरै सpt्कल्पित थिएँ कि मेशिनले ती सबै गर्न सक्दछ। म सामान्यतया "पश्चिमी औषधि" अभ्याससँगै रहन्छु। म जसरी भए पनि उनको डेभिड लिए।
म DAVID दस दिन को लागी प्रयोग गर्‍यो, दिनमा दुई पटक। मैले तुरुन्तै निन्द्रामा फरक पाएँ। म अझ गहिरो निद्रामा सक्षम थिएँ, यति लामो समय सम्म। एक हप्ता पछि, मैले यो पनि याद गरें कि मैले जति पीडा औषधी सेवन गरिरहेको छु सामान्य छैन। केवल थोरै मात्र तर त्यो मेरो लागि ठूलो भिन्नता थियो। मैले देखेको परिवर्तनहरूबाट म स्तब्ध भएँ र त्यसपछि DAVID लाई मेरो थेरापिष्टमा फर्काउनु पर्‍यो।
लगभग दुई दिन DAVID फिर्ता पछि, म फेरि नराम्रो महसुस गर्न थाले - अधिक पीडादायी, बढि निद्रा। मैले त्यतिखेर आफैले किन्ने निर्णय गरें र यसो गर्नको लागि भाग्यशाली भएँ। म दिनमा दुई पटक प्रयोग गर्ने मेरो चक्रमा फर्कदैछु। फेरि, मैले तत्काल परिणामहरू देखेको छु। धन्यवाद, मन जिउँदो। यसले वास्तवमै मलाई मद्दत गरेको छ। "
डोनाली क्याल्डवेलबाट प्रशंसापत्र
नोभेम्बर 24, 1999
“म यस्तो अद्भुत उत्पादनको विकासको लागि तपाईंलाई पर्याप्त धन्यवाद दिन सक्दिन। पछिल्ला आठ महिनाको लागि, म मेरो फाइब्रोमायाल्जियाको लागि डेभिड प्रयोग गर्दैछु।
बिहान एक perker सत्र मलाई दिन को माध्यम ले प्राप्त गर्न को लागी पर्याप्त ऊर्जा दिन्छ। काम गर्न असमर्थ भएको दुई वर्ष पछि, म अब दुई पार्टटाइम कामहरूमा काम गर्दैछु। मांसपेशी दुखाइ लगभग विगतको चीज भएको छ। जब यो हुन्छ, DAVID मा द्रुत सत्र चाँडै यसलाई सुधार गर्दछ। निद्राको गडबडीको कारण, तीन बर्ष भन्दा बढीको लागि निद्राको लागि पूरक आहार लिनु आवश्यक थियो। अब डेभिडसँग म सबै स्लिप एडहरू र राम्रो निद्रामा छु। बिस्तारै, मैले मेरो दिमाग धेरै स्पष्ट र सतर्क भएको पाएको छु। मेरो पुरानो व्यक्तित्व अन्ततः फिर्ता गर्न थालेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी लाभहरू बाहेक, म मेरो ध्यानहरू बढाउन डेभिड प्रयोग गरेर राम्ररी रमाईलो पनि गर्दैछु। म खेल र अन्य सत्रहरू अन्वेषण पनि उपलब्ध छ जुन उपलब्ध छ।
मैले वितरक बन्ने र यस अद्भुत प्रविधि अरूलाई बाँड्ने निर्णय गर्दा यो गाह्रो निर्णय थिएन। ”
लोरी हेसलहर्स्टबाट प्रशंसापत्र
सेप्टेम्बर 27, 1999
"डेभिडका लागि मेरो हार्दिक आभार। सन् १ 1964 .XNUMX देखि डिजेनेरेटिभ डिस्क रोगबाट पीठ दुख्ने समस्या भोग्नुपर्दा, डेभिडले साँच्चै मेरो संसार र जीवन शैली परिवर्तन गरेको छ।
जब मैले पहिलो पटक डेभिडको प्रयोग गर्न सुरू गरें, मैले अन्ततः गहिरो निन्द्रामा सक्षम भएँ र बिस्तारै कम पीडा महसुस गरें। तीन हप्ता भित्र, वास्तवमा घर बाध्य पछि, म पाँच घण्टा सम्म बाहिर जान सक्षम भयो! साथीहरु जसले मलाई एक समय मा देखेनन् ममा भएको परिवर्तनमा बिल्कुलै छक्क पर्छन्। म सुत्दछु, कम दुखाइ छ र अधिक आराम पाएको छु। अद्भुत! मैले निवास परिवर्तन गर्न पनि सकेको थिएँ। डेभिड बिना यो असम्भव हुने थियो। विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रयास गर्नु एक रोमाञ्चक अनुभव र रमाईलो अनुभव हो।
मेरो हार्दिक साँचो पुन: धन्यबाद र आरामदायी रातहरू मलाई दिनु भएकोमा फेरि धन्यवाद। अब म खुशी मनाउन चाहन्छु उत्सव मनाउन र मेरो th० औं जन्मदिन मात्र टिकाउन होइन। ”
एल्ज्बिटा गोरेकाबाट प्रशंसापत्र
जुलाई 20, 1999
“मलाई डेभिडसँगको मेरो अनुभवको बारेमा राय लेख्न भनियो।
तपाईको शोध अध्ययनको एक हिस्सा बन्ने मौकाको लागि धन्यबाद र मलाई DAVID को प्रयोगबाट चिकित्सा सुविधाहरूको अनुभव गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। यो अद्भुत brainwave entrainment उपकरणले मेरो दयनीय जीवन सजिलो, थप सहन योग्य बनायो, र प्रयोग गर्दा मेरो जीवनको गुणस्तर बढायो।
सन् १ 1992 until २ सम्म म एक ऊर्जावान व्यक्ति थिए जब मेरो गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूको शुरुवात (पीठमा चोटपटक, डिप्रेसन, थकान, अनिद्रा र त्यसपछि माध्यमिक दुर्बल हुने फाइब्रोमायाल्जिया / मायोफेशियल पेन सिन्ड्रोम जटिलको रूपमा, र हाशिपोटोको थाइरोइडिटिसको कारण हाइपोथायरायडिजमको कारणले म ढिलो र दु: खलाग्दो जस्ता अवस्थामा आयो। मेरो दैनिक जीवनको प्रत्येक कार्य रोबोट भयो। मैले मेरो सम्पूर्ण शरीरमा Musculoskeletal पीडा अनुभव गरें। मैले पनि प्यारेस्थेसियास, एडेमा, कोमलता, मेरो मांसपेशीमा तान्ने, घाँटी, टाउको, काँध, हतियार, मेरो पूरै पीठ, छाती, पेट, हिप्स, नितम्ब, खुट्टा, घुँडा, कुहिन, खुट्टा, जोड्ने, अस्थिबंधनको अनुभव गरें। । माथिको साथ गैर पुन: स्थापना, अप्रकाशित, प्रकाश, खण्डित निद्रा बान्की र शरीरको कठोरता, थकान, टाउको दुख्ने, चिन्ता, उदासीन, चिडचिडा आंत्र सिन्ड्रोम, इर्रिडेड मूत्राशय सिन्ड्रोम, गरीब अल्प-अवधि स्मृति, कमजोर एकाग्रता, चिड़चिड़ापन, संवेदनशीलता चर्को आवाज, चम्किला बत्तीहरू, श्रवणशक्ति कम भएको, लागूपदार्थको प्रति संवेदनशीलता, वातावरणीय संवेदनशीलता, धमिलो दृष्टि, शुष्क आँखा, सुख्खा मुख, सन्तुलनको समस्या, दूरी न्याय गर्ने समस्या, कुरा गर्दा र / वा लेख्ने क्रममा अप्ठ्यारोपन, असंगत, ठंडा, चक्कर, फ्लू जस्तै लक्षणहरू, घाँटी दुखाइ, तातो / चिसो असहिष्णुता, भूख न लाग्ने, मुड स्विings्ग, रात पसीना, अतिसंवेदनशील छाला, सास फेर्दा दुखाइ र सास फेर्न कठिनाई। मेरा लक्षणहरू दोहोरिने गतिविधि, शारीरिक अत्यधिक गतिविधि वा कम गतिविधि र खराब शारीरिक र मानसिक तनाव, चिन्ता, चिसो, गर्मी, उच्च आर्द्रता, मौसम परिवर्तन, हार्मोन र अधिकको साथ खराब हुन्छन्।
माथिका लक्षणहरू पढ्दा मात्र यसले एउटा बनाउँछ निराश तर मेरो मामलामा म ती सबैको अनुभव गर्छु। लक्षणहरू दैनिक रूपमा दैनिक कामकाजमा काम गर्न सक्षम नहुने, र पहिले जस्तो चीजहरू गर्न सक्षम नहुनेजस्ता आघात सहित मेरो सामान्य कार्यलाई बिगार्न गम्भीर छन्।
डेभिडले मेरो लागि के गर्‍यो? म प्रायः सबै चीजहरू प्रयोग गर्दै छु जुन हालको औषधीले मेरो स्वास्थ्य समस्याहरूको लागि दिन सक्ने सुधारको लागि थोरै सुधार ल्याईरहेको छ (ती मध्ये धेरैजसो चीजले मलाई एक दिनदेखि अर्को दिनसम्म बाँच्न मद्दत गर्दछ)। मेरा लक्षणहरू बहु-अनुशासनात्मक कार्यक्रमहरू सहित सुधार गर्दछन् जसमा: गर्मी, कोमल व्यायाम, सुख्खा मौसम परिवर्तन, विश्राम, प्रकाश मसाज, चुम्बकीय चिकित्सा, अल्ट्रा-टर्म, इलेक्ट्रो-उत्तेजना, एक्यूपंक्चर, पूरक, जडिबुटी, औषधि तर केहि पनि डेभिड जत्तिकै प्रभावकारी थिएन। मलाई दिन प्रति दिन मात्र बाँच्नको लागि आशा दिईयो। यो उपकरण प्रयोगको पहिलो दिनदेखि (करीव months महिनासम्म प्रयोग गर्न जारी), मेरो निद्रा बान्की सुधार गरिएको छ, म गहिरो सुतिरहेछु र मेरो वेक अपको फ्रिक्वेन्सी घटेको छ। मैले कम दुखाइ, कम कठोरता, कम मांसपेशी कोमलता, केही संवेदनशीलता घटाएको र शारीरिक र मानसिक उर्जा बढाउने अनुभव गरें। म र मेरो वरपरका मानिसहरु धेरै खुशी भए। यो मेरो स्वास्थ्य को लागी अधिक गर्न र मेरो परिवार को एक हिस्सा हुन को लागी धक्का को लागी एक नयाँ संभावना जस्तै थियो।
हाल, DAVID को फिर्ताको चार हप्ता पछि मेरो निद्रा बान्कीहरू मेरो अघिल्लोमा फर्कियो। फेरि म उठ्दछु ताजा छैन। म गहन, गहिरो, सुस्त, पीडादायी, थकाउने, सताउने, असहनीय दु: खी अनुभव गर्दछु। म पनि अधिक अनुभव गर्दछु: कठोरता, थकान, संवेदनशीलता, चिड़चिड़ापन, गरीब एकाग्रता, चिन्ता, डिप्रेसन र बेकारको भावना।
मैले डेभिडलाई मेरो निद्राको गुणस्तरको लागि महत्त्वपूर्ण ठान्यो, मेरो एक मात्र विकल्प, विशेष गरी डाक्टरहरूले फिब्रोमायाल्जियाको कुनै उपचार छैन भन्ने विश्वास गर्छन्। ”
Anghared फिन्च बाट प्रशंसापत्र
14 सक्छ, 1999
“म अत्यधिक थकान र पीडाबाट ग्रस्त छु फाइब्रोमायाल्जियाको कारण। डेभिड प्याराडाइज जूनियरको प्रयोग पछि चार हप्तासम्म मैले दिनको छ 'राम्रो' घण्टा अनुभव गर्न थालें जहाँ मैले 75 XNUMX% सामान्य वा प्रि-फाइब्रोमाइल्जिया महसुस गरें। एफएमएसको साथ दुई वर्षको अवधिमा धेरै थोरै माफी पाएको अनुभव गर्दै - म धेरै उत्साहित छु। मैले पीडा र थकानमा उल्लेखनीय कमी आएको अनुभव गरें जुन मैले आफैलाई सोचे 'म प्रायः सामान्य महसुस गर्छु!' मेरो आशा छ कि छ घण्टा आठ मा परिणत हुनेछ, तब दस, त्यसपछि बाह्र र म हुन चाहन्छु कार्यको लागि फिर्ता हुनेछ।
प्रायजसो जब म कुनै मेडिकल अपोइन्टमेन्ट वा इरान्डबाट घर फर्कन्छु म धेरै पीडामा हुन्छु र केही पनि गर्न थकित हुन्छु। म डेभिडमा आधा घण्टाको कार्यक्रम गर्दछु र महसुस गर्छु 'म अब तान्न सक्छु र बेलुकाको खाना तयार गर्न सक्छु।' थप रूपमा म एन्डोरफिन रेश्को अनुभवको साथ पीडाको सट्टामा तान्न र योग गर्दैछु। यसले व्यायामलाई अझ ठूलो रमाइलो बनायो!
मैले २० बर्ष सम्म ध्यान गरें, दुई वर्ष योगाभ्यास गरे, क्यू ग yearsले for बर्ष र मैले तुरुन्तै थाहा पाएँ कि दुई मिनेटमा नै मलाई डेभिडको साथ गहिरो ध्यान पुर्‍याइयो। मैले देखेको छु कि यदि म दुई घण्टा ध्यान गर्न सक्षम भएँ भने म एफएमएस लक्षणमा ठूलो कमी आएको हुँ तर म प्राय: हरेक राज्य वा एक हप्तामा एक पटक यो राज्य प्राप्त गर्न सक्दछु किनकि मेरो दिमाग स्थिर हुँदैन। डेभिडको साथ यो राज्य दैनिक आधारमा बढी प्राप्य भयो। मैले मेरो डाक्टरसँग अनुभव गरेका परिवर्तनहरूबारे छलफल गरें र हामी दुबै महसुस गर्छौं कि त्यहाँ मेरो सुधार र डेभिडसँग निश्चित सम्बन्ध छ। ”
पॉल राइक्सबाट प्रशंसापत्र
3 सक्छ, 1999
“करीव अक्टुबर, १ 1998 1999 to देखि मार्च १ XNUMX about। को अवधिमा मैले रातमा निदाउनको लागि आफ्नो क्षमतालाई सुधार गर्ने उद्देश्यको लागि DAVID प्रयोग गरें। मेरो DAVID प्रयोग गर्नु अघि, मलाई हरेक रात कम्तिमा five देखि १० पटक उठाउन असम्भव थियो।
जब मलाई पहिलो पटक डेभिडको प्रयोग दिइयो, म यसको दावी प्रभावकारिताको बारेमा धेरै सचेत हुनु स्वीकार्नुपर्दछ। म उपकरण प्रयोग गर्न प्रयास गर्न पहिलो हिचकिचाएँ, यो अझै अर्को ट्रेंडी इलेक्ट्रॉनिक नौटंकी हो भनेर सोच्दै। फ्ल्यासमा उच्च र कम प्लेबो प्रभावको बाहेक अन्य कम फाइदा। मैले सुरुमा यस यन्त्र प्रयोग गरेर रोक्न खोजेको थिएँ तर एक साँझ ढिलो भयो, एक हप्ता पछि यो प्राप्त भएपछि, म ओछ्यानमा पल्टें र सकृय पार्छु। मैले करीव १० मिनेटको लागि बत्तीहरूको प्रदर्शन हेरें र म अधीर भएँ, बन्द गरेँ र ओछ्यानमा गए। त्यो साँझ म केवल दुई पटक उठ्यो। यस सुधारले सुत्नु भन्दा पहिले धेरै पछिल्लो साँझको लागि उपकरण प्रयोग गर्न जारी राख्न प्रोत्साहन प्रदान गर्‍यो। निरन्तर निद्राको अवधि बढ्दै जाँदा र ब्यूँझनेको घटना घट्ने बित्तिकै मैले हरेक रात उपकरण प्रयोग गर्दै भेट्टाएँ।
डेभिडको सहयोगमा, मैले रातभरि निद्रा कायम गर्ने मेरो क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार देखेको छु। म निद्रा कायम गर्न कठिनाइहरूको सामना गर्ने जो कोहीलाई डेभिड प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्दछु। "
भिभियन मार्टिनबाट प्रशंसापत्र
अप्रिल 27, 1999
"अनुसन्धान / अध्ययन कार्यक्रमको क्रममा DAVID को प्रयोग गर्दा मैले भोगेका केही लाभहरू निम्न छन्:
बिहान र साँझ कठोरताको पूर्ण उन्मूलन
गहिरो र अधिक आरामदायी निद्रा
बिहान अझ रमाइलो र ऊर्जावान
राम्रो निद्राको कारण कम दुखाइ
ऊर्जा बान्की अधिक स्थिर
म व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्दछु कि DAVID मेसिनले फाइब्रोमायाल्जियासँग सम्बन्धित केहि लक्षणहरू नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण मद्दत गर्दछ। म निश्चित रूपमा Fibromyalgia वा क्रोनिक थकान सिंड्रोम भएका जो कोहीलाई मेशिन सिफारिस गर्दछु। "
नतालिया डोब्रोलिजबाट प्रशंसापत्र
“मेरो फाइब्रोमाइल्जिया सिन्ड्रोम करिब five बर्ष भइसक्यो। यस अवस्थासँग सम्बन्धित सबैभन्दा खराब समस्याहरू निद्रा बान्कीको स्वरूप हो जुन निदाउन असमर्थता, प्रकाश निद्रामा जुन अप्रशोधित छ र सजिलै अवरोधको रूपमा देखा पर्दछ, लामो निद्रामा असमर्थता, वा पुनर्जन्म र उपचारको लागि आवश्यक गहिरो निद्रा चरणहरूमा पुग्न, र / वा अन्य निद्रा गडबडी। मैले DAVID यी सबै लक्षणहरूको लागि अत्यन्त प्रभावकारी पाएको छु। यसको प्रयोग गरेर, म चाँडै निदाउन र निदाउन सक्षम छु। मैले मेरो डेभिडमा बिभिन्न कार्यक्रमहरू पनि पत्ता लगाएको छु जसले उपचार र ध्यान दृश्यका साथसाथै आराम गर्न र ऊर्जा बृद्धि गर्न पनि सहयोग पुर्‍याउँछ, यी सबै दु: ख नियन्त्रण र शारीरिक र भावनात्मक तनाव कम गर्नमा मद्दत गर्दछ। म मेरो डेभिडसँग धेरै खुसी छु। "
सामान्य मोनेटबाट प्रशंसापत्र
फेब्रुअरी 20, 1998
"म तीन बर्ष अघि फाइब्रोमाइल्जिया र यस वर्ष क्रोनिक थकान सिन्ड्रोमको साथ पत्ता लाग्यो। मेरो मुख्य गुनासोहरू थकान, पीडा र अनियन्त्रित हल्लाउने हो।
म DAVID तीन महिना को लागी प्रयोग गर्दैछु। DAVID एकाई प्रयोग गर्नाले मेरो पीडाको तीव्रता र अवधि घटेको थियो। जे होस् म अझै टाउको दुख्ने गर्थें, म माइग्रेनहरू पाउँदिन, र मेरो टाउको दुखाइ तिनीहरू पहिले जस्तो लामो समय सम्म चल्दैन।
पीडा, थकान र आत्म चेतनाका कारणले गर्दा म एक पटकमा तीन महीनासम्म गायब भएँ। म मेरो असुविधाको कारण लुकाउन को लागी प्रयोग, तर DAVID प्रयोग गर्नाले मेरो असुविधा कम भएको छ र म पहिले सम्म पीडित छैन। यसको एक अंश चिन्ताका हमलाहरू जस्तो महसुस भयो। म अभिभूत भएँ, र त्यो घण्टा वा दिन सम्म रहन सक्दछ। यस अवस्थामा, मेरो पीडा र थकान एक दिन वा एक महिनामा फिर्ता आउन सक्दछ र गम्भीरतामा पर्दछ।
DAVID प्रयोग गरिसकेदेखि, मलाई गम्भीर चिन्ताको हमला भएको छैन, र यी आक्रमणहरूको फ्रिक्वेन्सी कम छ। मेरो निद्रामा सुधार आएको छ र म थाकेको छु। थकानको कारणले गर्दा मेरो भावनाहरू नियन्त्रण गर्न कठिन थियो। DAVID उपकरण प्रयोग गर्दा मसँग अधिक नियन्त्रण छ।
DAVID प्रयोग गर्नाले मेरो उर्जाको स्तर पनि बढेको छ। म दिनमा १ eigh घण्टा सुत्थें र अझै थाकेको छु। अब म कम निन्द्रामा छु र बढी ऊर्जा छ। सुत्ने समस्या भएका परिवारका सदस्यहरूले पनि डेभिडलाई प्रभावकारी पाएका छन्।
पहिलो दिन मैले एकाईको प्रयोग गरें तर अर्को दिन स्कूल जानको लागि म हिड्न सक्दिनँ। भोलिपल्ट म बाहिर काम गर्न सक्षम भएँ। मैले चार वा पाँच दिनको लागि युनिट प्रयोग गर्न रोक्नको लागि यो वास्तविक इकाई थियो कि काम गरिरहेको थियो वा यदि मेरो अपेक्षाहरूले मैले चाहेको परिणामहरू उत्पादन गर्दै थिए भने। केही दिन भित्र म फेरि थाकेको र अल्छि महसुस गरिरहेछु। म युनिट मा फिर्ता गए र फिर्ता बन्द छैन। न त मैले योजना बनाएको नै छु। ”
शर्ली स्मिथबाट प्रशंसापत्र
फेब्रुअरी 12, 1998
“१ 1982 XNUMX२ पछि, म एउटा कानमा दुखिरहेको छु, जुन हरेक वर्ष झन् झन् खराब हुँदै गइरहेको छ।
मैले प्रयास गरेका केहि समाधानहरू एक मुख विभाजन, फिजियोथेरापी, चिरोप्रेक्टर, एक्यूपंक्चर, स्टेरोइडहरू मेरो मुखमा ईन्जेक्सन, र प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स थिए। केवल चीजले सहयोग पुर्‍यायो एन्टी-इन्फ्लेमेन्टरी ड्रग्स र एन्टी-जप्ती ड्रग्स। मलाई एन्टी-सेज्योर ड्रग्सबाट एलर्जी भयो र तिनीहरूलाई बन्द गर्नुपर्‍यो।
पछिल्ला दुई वर्षमा, मैले अधिक दुखाइको औषधि लिन खोज्नु पर्‍यो र सुझाव दिइएको एउटै मात्र समाधान भनेको कानमा जाँदै गरेको स्नायु तोड्नु थियो।
मैले नोभेम्बरमा DAVID को प्रयोग गर्न थालें र त्यस बेलादेखि मेरो पीडामा ठूलो कमी आएको छ। मैले कानको दुखाइका लागि पर्चेको दुखाइ औषधी प्रयोग गर्न छोडेको छ र कानको दुखाइका साथ रातमा मलाई जागा रहन छैन।
म यस यन्त्रका बारे सचेत बने तर टेलिभिजनको माध्यम भए पनि र यसले मलाई गरेको सहयोगको लागि म आभारी छु। "
ग्रेग Mynzak बाट प्रशंसापत्र
फेब्रुअरी 6, 1998
“मैले पहिलो पटक टिभीमा डेभिडको बारेमा पछिल्लो गिरावटमा फेला पारेँ। त्यस समयमा, म भर्खरै तीन प्रमुख पेट सर्जरीहरूको माध्यमबाट भएको थिए। जटिलताहरूको प्रकृतिका कारण, मैले धेरै महिनाहरूमा रातको सुत्ने सुत्न पाइन, विशेष गरी ममा भएको पीडाको परिणामस्वरूप। जब मैले मेरो मेशीन प्राप्त गरें, म तुरून्त परिणामहरूमा विश्वास गर्न सक्दिन।
म आफैंलाई मूर्ख बनाउँदैछु भन्ने सोचमा, मैले दिनदिनै व्याकुल हुँदै डेभिड प्रयोग गरें। मैले यसलाई काममा पनि लिएँ र खाजाको समयमा प्रयोग गर्‍यो। यसले मलाई काममा राम्रोसँग कार्य गर्न सक्षम बनायो जुन मैले लिइरहेको पेनकिलरहरूको प्रयोग हटाएको छु। यसले मलाई भइरहेका डरलाग्दो साइड इफेक्टहरूलाई हटायो। उपकरण प्रयोगको दोस्रो दिन पछि, मलाई थाहा थियो कि मलाई ठूलो लाभ यसको लागतको लागि राम्रो थियो।
धेरै चोटि म निद्रामा परे पनि सुत्नु भन्दा पहिले DAVID को प्रयोग गर्दा र भोलिपल्ट बिहान उठेर अलार्म घडीमा दुबै हेडफोन र आँखाहरू सेट भएको साथ। मलाई विश्वास छ कि एकाईका कार्यक्रमहरूले मेरो ओछ्यान सुत्नु भन्दा पहिले नै दुखाई मेटायो र मलाई एकदम राम्ररी र पीडा रहित सुत्न सक्षम बनायो।
जब म यो इकाई र यसको प्रभावलाई जो कोहीले पनि जिउँदो पीडासँग बाँचिरहनुपर्दछ र सामान्य रूपमा काम गर्नुपर्दछ यसको प्रमोटि to गर्दा विश्वमा म विश्वस्त छु। "
मार्था हेलेबाट प्रशंसापत्र
अक्टोबर 15, 1997
“मैले सेप्टेम्बर १ 19976a मा एक डेभिड मेशिन खरीद गरें र सामग्री पढेपछि र केहि कार्यक्रमहरूमा थोरै प्रयोग गरे जुन धेरै फाइदा प्रदान गर्दछ। किनकि तपाईले मलाई भन्नुभएको छ कि मसँग बीटा तरंगहरूको अत्यधिक मात्रा थियो, त्यसैले मैले कुनै कार्यक्रमहरू समावेश गरिन जुन यी थिए। मैले सुरूमा क्लो आउट क्लोसेट र मेडेट टु स्लीप प्रोग्रामहरू प्रयोग गरें। यद्यपि पहिलो पटक मेशिन प्रयोग गर्दा पनि, म मेरो स्टर्नम वरिपरि तनाव महसुस गर्न सक्छु। ती दुई कार्यक्रमहरू प्रयोग गरिसकेपछि, अपरान्हको पूर्व र सुत्ने बेलामा, तीन दिनसम्म मैले चौथो दिनमा ओछ्यानबाट उठ्दा याद गरें कि मेरो काँध र घाँटीमा उनीहरूलाई यत्तिको गहिरो दुखाइ छ। लामो समयको सट्टामा अस्पष्ट झुकाव महसुस भइरहेको थियो, र त्यो दु: ख समाप्त भयो! त्यसोभए मात्र म दुखीको निरन्तर स्तर निर्धारित गर्न सक्थें जुन मलाई १ देखि १० को मापनमा to को नजीक दिइन्थ्यो, बरु which जुन मलाई तपाईको प्रश्नावलीमा राख्छु भनेर सोच्दछ। केही दिन पछि मेरो उर्जा स्तर बिस्तारै बढ्यो, जबकि मेरो सहनशक्ति कमजोर थियो र। मेरो तनाव टाउको दुखाइ, जुन धेरै गम्भिर हुन सक्छ, धेरै कम बारम्बार भएको छ, र जब ती हुन्छन् म तिनीहरूलाई मेटाउन डेभिड प्रयोग गर्न सक्छु। मैले मेरो Zoloft को खुराक प्रति दिन १०० मिलीग्राममा पनि आधा जम्मा गरेको छु।
म केवल एक मात्र त्यस्तो होइन कि भिन्नता याद गरे। मेरो श्रीमान्, जसले मेरो खर्राउने सम्बन्धमा मेरो समस्याग्रस्त निद्रामा गडबडी गर्नुहुन्थ्यो, धेरै समय तिरेको छ। म स्पष्ट रूपमा अब घरको छानामा खर्रा लिइरहेको छु जब म सुत्ने मेसिन प्रयोग गर्छु। मेरो मसाज थेरापिस्टले पनि एउटा उल्लेखनीय भिन्नता याद गरेको छ। जहाँ मेरा मांसपेशिहरू उनलाई मा हल्का स्पर्श संग लगभग उफ्रिने प्रयोग गर्थे, र प्रतिक्रिया गर्न धेरै ढिलो थियो, अब तिनीहरू अधिक लचिलो छ त्यसैले मालिशहरू अधिक फाइदाजनक भएको छ।
यद्यपि म कुनै पनि हिसाबले राम्रो छैन, तर मेरो जीवनस्तर सुधार भएको छ जहाँ म सेप्टेम्बरको अन्तमा पेन्सल्भेनियामा मेरो बहिनीलाई भेट्न जान्छु, र मेरो डेभिड मेशीन संगै पाँच दिनको घोडा कार्यक्रम मा भाग लिन सक्षम थियो। घोडा शो, सबै पैदल, लामो घण्टा र मेरो घोडाहरू संग एक साथीलाई मेरो सहयोग को साथ, धेरै साबित भयो, त्यसैले मैले आफ्नो छोटो कटौती गर्नुपर्‍यो र अन्तिम सप्ताहन्तमा छुटाउनु पर्‍यो। घर फर्किनु भन्दा पहिले मलाई न्यु जर्सीको होटेलमा पल bed्ग बनाउन दुई दिन लिन बाध्य पारियो। मलाई कुनै शंका छैन कि डेभिड मेशिन बिना मेरो शरीरको ऐंठन धेरै नराम्रो, लामो समयसम्म चल्ने र अधिक कष्टकर हुने थियो। घर फर्के देखि मलाई लगभग अडीच हप्ता लाग्यो बिन्दुमा पुग्न जहाँ म थकित भएकी छैन। मँ अझै पनी केहि ऐंठन समस्याहरु छन्।
मेरो श्रीमान्, जलाल होसेन, एमडी।, र म डेभिड मेशिनले हाम्रो जीवनमा आएको सकारात्मक भिन्नताको लागि पूर्ण समर्थन गर्दछु। ”
प्याट मिशेलबाट प्रशंसापत्र
बीउमन्ट, अल्बर्टा, क्यानाडा
अक्टोबर 2, 1995
“म मेरी छोरीलाई धेरै फाइदाहरूको लागि धन्यवाद दिन लेख्दै छु र मैले डेभिड प्रयोग गरेर अनुभव गरें। तपाईं सम्झना हुनेछ कि Joyanna र म तपाईं ध्यान उनको घाटा अस्थिरताको कारण शुरूमा भेट्यौं। हामी कार्यालयमा हुँदा, मैले पत्ता लगाएँ कि डेभिड बिभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। मैले मेरो निद्रा विकार र दीर्घकालीन पीडासँग डिलिन प्रयास गर्ने निर्णय गरें। हामी सँग दुबै सकारात्मक परिणामहरू थिए तपाईको आविष्कारको प्रयोग गरेर।
जोयनालाई घर र स्कूलमा कामहरू पूरा गर्न कठिनाई भइरहेको थियो। उनको निराशा, उनको शिक्षक 'र हाम्रो आधारभूत ADD सम्बन्धित धेरै समस्या पैदा गर्दै थिए। एकचोटि उसले मेशिन प्रयोग गर्न थाल्यो हामीले एडीडीसँग मात्र व्यवहार गर्न सकेनौं, तर परिणामगत समस्याहरू पनि। फलस्वरूप, हामीले वर्षौंमा बिताएका सबैभन्दा रमाइलो पारिवारिक ग्रीष्म vacationतुहरू पाउन सक्षम थियौं।
मेरो पक्षको लागि, यो बिहानीको उठेकोमा विश्वास गर्न को लागी नियमित हुन गएको छ ताजा र राम्रो रातको निद्राबाट आनन्दित महसुस गर्न। जब म चार विभिन्न औषधीहरूमा थिएँ, म सुत्ने क्षमतामा भर पर्न सक्दिन। म DAVID का साथ त्यसो गर्न सक्दछु। मैले डेभिडको प्रयोग गठिया तथा फाइब्रोमाइल्जियाको लामो दुखाइको सामना गर्न गहिरो आराम गर्ने स्थितिमा पनि गरें। यद्यपि म कहिले पनि पीडाबाट मुक्त छुइन, DAVID ले मलाई कोशिस गरेको कुनै पनि औषधि भन्दा बढी प्रभावकारी राहत प्रदान गर्दछ र कुनै साइड इफेक्टको फाइदाको साथ! साथै, तपाईंले भन्नुभयो कि तपाईंले आफ्नो आविष्कारको प्रयोग र अस्वाभाविक स्वास्थ्यमा सुधारको बीचमा एक अस्पष्ट सम्बन्ध देख्नुभयो। यो मेरोलागि सत्य देखिन्छ, किनकि अब म "यताउती भइरहेको सबै कुरा समेट्ने" जस्तो देखिदैन।
मेरो चिठ्ठी टु .्ग्नका लागि, म मेरो छोरीको तर्फबाट र म आफैंलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, डेभिड प्रयोग गरेर हामीले अनुभव गरेका जीवनको सुधारिएको गुणको लागि। ”
मारी DeLuca बाट प्रशंसापत्र
अगस्ट 26, 1995
“डेभिड मेशिनले मलाई मेरो पीडा स्तर नियन्त्रण गर्न मद्दत गरेको छ। म उपकरण धेरै प्रयोग गर्दछु। कम्तिमा तीन घण्टा दुखाइ राहत बाट। मलाई राती सुत्नलाई मद्दत गर्न पनि धेरै रात प्रयोग गर्छु।
एल्के हेमिन्जबाट प्रशंसापत्र
डेभन, अल्बर्टा, क्यानाडा
जुन 18, 1992
"मैले DAVID पछिल्लो तीन बर्षमा दुखाई नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरें। यसले मलाई विन्दुमा पुर्‍याउँछ जहाँ पीडा अत्यन्त कम हुन्छ।
मेरो छोरालाई एक बर्षको लागि निद्राको समस्या थियो जहाँ उनी आत्महत्या गरे। डेभिडको सहयोगमा, उनले तीन महिनामा आफ्नो निद्रा सम्बन्धी समस्यामा विजय प्राप्त गरे र अब उनलाई आवाश्यक पर्दैन। मेरो धन्यवाद तपाईंलाई लाग्छ। ”